वैध हतियारहरुको अवैध 'राज', को-कोसँग छ जीएसजी–५ हतियार ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»वैध हतियारहरुको अवैध ‘राज’, को-कोसँग छ जीएसजी–५ हतियार ?
वैध हतियारहरुको अवैध ‘राज’, को-कोसँग छ जीएसजी–५ हतियार ?
By सन्दीप खत्री on ८ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०५:०३ पत्रपत्रिका
काठमाडौं: जिल्ला प्रशासन कार्यलयले हचुवाको भरमा हतियार राख्न ईजाजतपत्र दिँदा प्रहरीलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । आपराधिक पुष्ठभुमिबाट गुज्रिरहेका व्यक्तिहरूले ईजाजत पाउँदा हतियारको दुरुपयोग हुनुको साथै सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो । अवैध तरीकाले असुलेको रुपैयाँबाट नवधनाड्यको सूचीमा रहेका एकान्तकुनाका महेशबहादुर सिंहसँग प्रहरीले तीन बर्षअघि ईजाजत प्राप्त ६ थान हतियार बरामद गरेको थियो ।
त्यस्तै त्यहि बर्ष शंकरदेव क्यामपसका स्ववियु सभापति सुकबहादुर शुभराम बस्नेत र चार बर्षअघि बालाजुबाट पक्राउ परेका तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता यमबहादुर कार्कीलाई राज्यले हतियार राख्ने ईजाजत दिनुपर्ने कारण थिएन । यि सबैका हातबाट प्रहरीले अवैध रुपमा प्रयोग भएको वैध हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यसैगरी प्रहरीको सूचीमा लुटेरा हँुदै गुण्डागर्दीबाट व्यापारी तथा ठेकेदार बनेका काजी शेर्पा, काभ्रे घर भई हाल राजधानीस्थित सिफल बस्ने वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठले जीएसजी–५ नामक हतियार बोक्ने गरेका छन् । श्रेष्ठ अवैध तरिकाले मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गर्दै आएका माफिया हुन् । सहकारीको नाममा श्रेष्ठले अहिले मिटर व्याजको धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
गत वर्र्ष चलनचल्तीमा २२ बोर (२२ क्यालिबर)को भनिने जीएसजी–५ नामक हतियार सामान्य व्यक्तिको नाममा मगाएर केही दिनमै गुन्डाका नाइकेलगायतलाई नामसारी गरेकोसमेत प्रमाण भेटिएको छ । गृह प्रशासनले कसैको नाममा हतियार इजाजतपत्र पाएको पाँच वर्र्षसम्म अर्को हतियार ल्याउन वा नामसारी गर्नु गैरकानुनी मानेको छ । नेपालमा हातहतियारसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया प¥ुयाएर सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा इजाजतपत्र हतियार प्राप्त गर्न सकिन्छ ।